Umshini opholileyo, Iintyatyambo eziVuthayo, Ukutya okuPholayo - ALLCOLD
I-ALLCOLD zizinto eziphambili ezincomekayo kwisisombululo sokupholisa kunye neZinto zokupholisa ezincamathelayo, zidityaniswe ne-SEMCOLD USA (ebandakanyeka ekupholiseni i-vacuum kunye nefriji ngaphezulu kweminyaka engama-80), iiCoolers zethu zokuCoca umoya ziyilelwe ukupholisa imifuno, iintyatyambo ezisandul 'ukusikwa, ukutya okubhakiweyo, iCentral Kitchen, Amakhowa, ukutya okuphekiweyo & irayisi yesushi, umgquba kunye neturf njl.
Amava kunye neenkonzo eziphezulu
I-ALLCOLD yinkokeli yehlabathi ekunciphiseni izisombululo kunye neZinto zokupholisa ezincamathelayo
ALLCOLD lishishini elinobuchwephesha obuphezulu linikezela kwi-R & D kwaye linendawo ye-10,000m2 eDongguan China
Ezona zitya zidumileyo
Inyama ephekiweyo yokuCoca umoya
Isantya sokupholisa ngokukhawuleza, Kuthatha kuphela malunga nemizuzu engama-30 ukupholisa ukusuka kwi-100 ℃ ukuya ezantsi kune-10 ℃. Ubushushu obufanayo bokupholisa embindini nakumphezulu wokutya. Akukho zidingo zikhethekileyo kubungakanani, imbonakalo kunye nendlela yemfumba yeemveliso HAYI "ungcoliseko lwesibini" lokupholisa kwigumbi lensimbi elingenanto. Ngokukhawuleza unqumla kuluhlu lwamaqondo obushushu angama-25-50 is olulunge kakhulu kuhlobo lweebhaktiriya. Iicooler AllCOLD zokucoca ngoku zisetyenziswa ngokubanzi ekupholiseni ...
Ukutya okuPholayo okuphefumlelweyo kokutya
Iimodyuli eziPholileyo kunye neeNgcaciso: Umatshini opholileyo oPholileyo oPhambili kwiSantya sokupholisa ngokukhawuleza. Ukutya okuphekiweyo kupholile ukuya kwi-10 need kufuna kuphela i-20-30, ukutya okubhakiweyo kupholile ukuya kwi-20 ℃ ngaphakathi kwi-10-20min. 2.Ukupholisa iyunifomu.Ngaphantsi kwemeko yokuphuma, ukutya kupholile ukusuka kumbindi ukuya kumphezulu. Ukupholisa amanqanaba amabini ukunciphisa ukulahleka kwamanzi okutya. Ukusuka kubushushu obuphezulu ukuya kuma-60 ℃, ukutya kuya kupholiswa ngokukhawuleza ukuthintela ukukhula ngokukhawuleza kwebhaktheriya, ukugcinwa kwesibini kuya kuthoba ukupholisa ukunciphisa ukulahleka komphunga, kunye nokuphucula incasa yokutya. 4.M ...
Indawo epholileyo yokubhaka
ALLCOLD Iingenelo zokupholisa umoya? Indlela ye-1.Ultra-ekhawulezayo yokupholisa ejikeleze i-20mins / umjikelo. 2.Ixesha elide lokugcina ubomi ngama-2-3. 3.Ukusindisa umbane ngaphezulu kwe-40%. Ubuncinci ukonakaliswa kwemveliso. Kutheni usebenzisa Ukupholisa uMshini? Nje ukuba kuvunwe, konke okutsha kufikelela kuxinzelelo. Olu xinzelelo lubangela ukuphefumla (ukuphefumla) kunye nokuphefumla (ukubila) ikakhulu okubangelwa bubushushu. Imifuno yakho kunye nemifuno yokuphefumla kunye nokuphefumla kunokuncitshiswa kakhulu kunye neendawo zethu zokupholisa nge-75% okanye ngaphezulu. O ...
Indawo epholileyo epholileyo
Uncedo lwe-Cooler cooler (1) Gcina olona mgangatho uphambili weeturfs. (2) Ixesha lokupholisa lifutshane, ngokubanzi malunga nemizuzu eyi-15- 20. Ukukhawuleza, ukucoceka kwaye akukho kungcoliseka. (3) Ingathintela okanye ibulale i-botrytis kunye nezinambuzane. Umonakalo omncinci kumphezulu wamayeza kunye neeturfs 'zinokuphiliswa' okanye azizukuqhubeka nokwanda. (4) Ubumanzi obususiweyo bususa kuphela i-2% -3% yobunzima, akukho kumiswa kwendawo kunye nokususwa (5) Nokuba i-turfs ivunwa emvuleni, ukufuma komphezulu kungasuswa phantsi kwe-vac ...
(1) Gcina ezona mvakalelo kunye nomgangatho (umbala, ivumba, incasa kunye nezondlo) zamakhowa! (2) Ixesha lokupholisa lifutshane, ngokubanzi malunga nemizuzu eyi-15- 20. Ukukhawuleza, ukucoceka kwaye akukho kungcoliseka. (3) Ingathintela okanye ibulale i-botrytis kunye nezinambuzane. (4) Ukufuma okususiweyo kubangela kuphela iipesenti ezi-2 -3% zobunzima, akukho kumiswa kwendawo kunye nokususwa (5) Ubushushu bendawo nomphezulu uyalingana. (6) Ngenxa yokupholisa kwangaphambili, i-mushroom inokugcina indawo ende. Kutheni sisebenzisa cleaner c ...
Iitrobhu zokuCoca umoya
Izinto eziluncedo ze Umshini opholileyo (1) Gcina olona mgangatho ulungileyo wamayeza. (2) Ixesha lokupholisa lifutshane, ngokubanzi malunga nemizuzu eyi-15- 20. Ukukhawuleza, ukucoceka kwaye akukho kungcoliseka. (3) Inhibit okanye ukubulala i-botrytis kunye nezinambuzane. Umonakalo omncinci kumphezulu wamayeza 'unokuphiliswa' okanye awuyi kuqhubeka ukwandisa. (4) Ubumanzi obususiweyo bubalelwa kwi-2% -3% kuphela yobunzima, akukho kumiswa kwendawo kunye nokususwa (5) Nokuba imifuno ivunwa emvuleni, ukufuma komphezulu kungasuswa phantsi kwento. (6) iDu ...
Indawo yeAllcold, iXiajie, Idolophu yaseQishi, iDongguan, iPhondo laseGuangdong, China